Pattern Alterations – အဆိုပါ Tailoress
တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးစံနမူနာ Neckline ပြောင်းလဲ
ဧပြီလ 11, 2015 | အထူးပြောစရာမရှိ | Pattern Alterations
AlteringaNeckline onaPattern Gaping Neckline Cut alongastraight line from the neckline to the waist dart point and then through the center of the waist dart. အ neckline ၏အရှည်ကိုအတိုကောက်အားလှည့်ပါ. အဆိုပါခါးခုန်ပြီးတော့ widens. re-သရေကျချုပ်ရိုး-လိုင်းများ. Large Neck Lower the neckline, removing it from the […]
တစ်ဦး Cowl လည်ပင်းဖန်တီးခြင်း
မတ်လ 12, 2015 | အထူးပြောစရာမရှိ | Pattern Alterations, Pattern Cutting
Cowl လည်ပင်းတစ် cowl လည်ပင်းကိုဖန်တီးရန်အခြေခံဘော်လီပုံစံညှိရန်: 1. အတွေဆီကနေအမှတ်မှဖြတ်တောက်နှင့်မူရင်းတွေဆီကနေခုန်ထပိတ်ပစ်ခြင်းအားဖြင့်ဘေးထွက်ချုပ်ရိုးမှတွေဆီကနေခုန်လွှဲပြောင်း. 2. ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ယူ. 1 inch from the shoulder point at the neckline and drawastraight line to createa[…]
မတ်လ 11, 2015 | အထူးပြောစရာမရှိ | Pattern Alterations, Pattern Cutting
အ hemline ထံမှ hipline မှတက် Cut ပေါင်သို့မဟုတ်တင်ပါးပြူးလာပြီး. ဘေးထွက်ချုပ်ရိုးမှအပြိုင် Keep. အလိုရှိသောငွေပမာဏပြီးတော့ re-ဆွဲဘေးထွက်ချုပ်ရိုးကဒီအပိုင်းအစထွက် Move. Flat Derriere To alter the pattern to fit snugly around the back, cut directly down the back dart to the hemline and then […]
တစ်ဦးဘော်လီစံနမူနာပြောင်းလဲ – တွေဆီကနေ
မတ်လ 9, 2012 | အထူးပြောစရာမရှိ | Pattern Alterations
တစ်ဦးဘော်လီစံနမူနာပြောင်းလဲ – ရှေ့လှံလက်နက်၏ဗဟိုမှတဆင့်ထို့နောက်တွေဆီကနေလိုင်းဖြတ်ပြီး Cut တွေဆီကနေအပြည့်အဝတွေဆီကနေ. ပခုံးချုပ်ရိုးမှာထပ်ရှောင်ရှားလိုအပ်သောငွေပမာဏကိုပြန့်နှံ့. ထိုကွဲပြားဖို့ဗဟိုအချက်များနှင့်အတူချုပ်ရိုး-လိုင်းများနှင့်လှံလက်နက် re-ဆွဲ. High Bust Cut along the bust-line to […]
ဇန္နဝါရီလ 19, 2012 | အထူးပြောစရာမရှိ | Pattern Alterations
ဗဟိုမျဉ်းတစ်လျှောက်စံနမူနာအကြီးစားလက်ဖြတ်အပေါ်လက်နက်ပြောင်းလဲနှင့်အပိုင်းအစလိုအပ်သောငွေပမာဏကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်. ထက်ဝက်ရှေ့မှအဖွင့်ပမာဏနှင့်နောက်ကျောဘက်ခြမ်းချုပ်ရိုး Add. ၎င်း၏ဘေးထွက်အပေါ်တစ်ဦးတိပ်အတိုင်းအတာကိုသုံးပြီးအကြီးစားအထက်လက်, ထိပ်စွပ်အိတ်အရှည်ရဲ့အရှည်ကိုတိုင်းတာ. ဖြတ် […]